Ndị na -emepụta ngwaahịa & ndị na -eweta ngwaahịa Ụlọ ọrụ ngwaahịa China
Commercial Electric OCPP 1.6Jason 2.0J at Kwekọrọ n'Ozizi 22kw Smart EV Fast Charger Station
Aha Model JNT-EVCP2-07C2S-00 JNT-EVCP2-22C2S-00 Inye Ike Ntinye 1P+N+PE 3P+N+PE Volta 230V AC 400V AC dị ugbu a 64A 64A Frequency 50/60Hz 50/60Hz Voltage mmepụta 230V AC 400V AC kacha dị ugbu a 2x32A 2x32A ike akara 2x7kW 2x22kW Onye njikwa ihe njikọ onye ọrụ T2/T2S oghere mkpuchi Galvanized steel Left/Right Panel Polycarbonate LED Indicator Green/Yellow/Red LCD Display 4.3 ″ ihuenyo RFID Reader Mifare ISO/IEC 14443 A ...
16A 32A 40A 48A New Energy Electric New imewe mgbidi n'ịnyịnya ev chaja electric ụgbọ ala batrị chaja
Ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ 230 ± 10%(1 phase) 400 ± 10%(3 phase) Ntinye Ugbu a 16/32A 16/32A Frequency 50Hz 50Hz Mmepụta Ugbu a 32A 32A Nyocha onye ọrụ RFID (ISO 14443） RFID (ISO 14443 LAN LAN nke mpụga (nhọrọ) ) + Wi -Fi (nhọrọ) LAN (nhọrọ) + Wi -Fi (nhọrọ) esịtidem OCPP 1.6 JSON OCPP 1.6 JSON Okpomọkụ na -arụ ọrụ -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C iru mmiri Max. 95% RH Max. 95% RH Altitude ≦ 2000m ≦ 2000m IP IP65 IP65 Charging Outlet 5m chaja USB 5m chaja ...
Ọrụ 2 * 22kw 64A EV Electric Car Battery Price Charge Station Ev Charger
Aha nlereanya JNT-EVCP1-07C2S-00 JNT-EVCP1-22C2S-00 Inye Ike Ntinye 1P+N+PE 3P+N+PE Volta 230V AC 400V AC nke dị ugbu a 64A 64A Frequency 50/60Hz 50/60Hz Voltage mmepụta 230V AC 400V AC kacha dị ugbu a 2x32A 2x32A ike akara 2x7kW 2x22kW Onye njikwa ihe njikọ onye ọrụ T2/T2S oghere mkpuchi Galvanized steel Left/Right Panel Polycarbonate LED Indicator Green/Yellow/Red LCD Display 4.3 ″ ihuenyo RFID Reader Mifare ISO/IEC 14443 A ...
Ụlọ ọrụ ozugbo 50A 250V AC Type1 Electric Car Power Charger American Standard Evse Cable Type 1
Ụlọ ọrụ ozugbo China EV Quick Charger, EV Charger, Anyị anọwo na -aga n'ihu maka ndị ahịa obodo na mba ụwa na -eto eto. Ebumnuche anyị ịbụ onye ndu ụwa niile na ụlọ ọrụ a na n'uche a, ọ bụ nnukwu ihe ụtọ anyị ije ozi na iweta ọnụego afọ ojuju kachasị elu n'etiti ahịa na -eto eto.
SAE J1772 Electric Charger Batrị 32A nwere asambodo ETL
OEM ọkọnọ China chaja EV, chaja ụgbọ ala eletriki na LCD, ụlọ ọrụ anyị na -ewepụta ọtụtụ ngalaba, gụnyere ngalaba mmepụta, ngalaba ahịa, ngalaba njikwa mma na etiti sevice, wdg. naanị maka imezu ngwaahịa dị mma iji gboo ihe ndị ahịa chọrọ, enyochala azịza anyị niile nke ọma tupu mbupu. Anyị na -eche mgbe niile gbasara ajụjụ dị n'akụkụ ndị ahịa, n'ihi na ị meriri, anyị meriri!
Ọkụ dị ọkụ maka ọdụ ụgbọ mmiri China SAE J1772 EV nwere eriri 1
Ọkụ dị ọkụ maka China SAE J1772, Recharge Station, ezigbo mma na -abịa site na nrube isi na nkọwa niile, na afọ ojuju ndị ahịa na -esite na nraranye anyị sitere n'obi. Ịdabere na teknụzụ dị elu na aha ụlọ ọrụ nke imekọ ihe ọnụ dị mma, anyị na -anwa ike anyị niile ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa na ọrụ dị mma karịa, anyị niile dịkwa njikere iwusi mgbanwe na ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ na imekọ ihe ọnụ, iji wuo ọdịnihu ka mma.
Igbe chaja EV EV chaja maka ụgbọ ala eletrik 40A Ụdị 1 nkwụnye
Chaja Joint EVC10 EV bụ chaja ụlọ ọhụrụ anyị, nke kachasị ọsọ na nke kachasị elu, na -akwụ ihe ruru 50 amps ma na -agbakwunye ihe ruru kilomita iri atọ na asaa nke ịnya ụgbọ ala n'otu awa nke ịchaji. Enwere ike itinye ọdụ cha cha nke EVC10 EVSE iji chajịa na 16 amps ruo 50 amps, na -enye ndị ọkwọ ụgbọ ala ohere ịhọrọ ọsọ dabara ha na ọkụ eletrik nke ụlọ ha. Onye ọ bụla ọkụ eletrik, ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí nwere ike ịwụnye Ebe Nkwupụta Ọha, ka ọ kwụọ ụgwọ na 16A ruo 50A, wee jiri eriri ịkwụ ụgwọ 18/25 ụkwụ yana ma ọ bụ NEMA 14-50 ma ọ bụ 6-50 nkwụnye.
Ọkwa 2, 240v eletriki ụgbọ ala (EV) na -akwụ ụgwọ ụgbọ
Ọkwa 2, ụgbọ ala eletrik 240 volt (EV) na-akwụ ụgwọ EV ọ bụla ruo 9X ngwa ngwa karịa mpụga mgbidi nkịtị, yana ntọala amperage na-agbanwe agbanwe ruo 50 amps (14A-50A) na nkwụnye ma ọ bụ nrụnye siri ike. Site na akwụkwọ ikike afọ atọ pere mpe yana ETL edepụtara maka nchekwa ọkụ eletrik, chaja EV anyị dị mfe maka onye ọkụ eletrik ọ bụla ịwụnye n'ime ma ọ bụ n'èzí. EVC10 eletriki vechile chaja bụ ọdụ chaja Wi-Fi na-enye njiri mara chaja site na iji ngwa ahụ, gụnyere ike ịtọ oge ịkwụ ụgwọ, nweta ihe ncheta itinye, hụ akụkọ nchaji gị niile n'otu ebe, jikọọ na Alexa , na ndị ọzọ.